ချဉ်ချဉ် စပ်စပ် ငါးသံပုရာပေါင်း
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, February 16, 2010 Tuesday, February 16, 2010 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်မိကြရင်း အစားအသောက် အကြောင်း ပြောဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မပြောပြတဲ့ ငါးသံပုရာပေါင်းကို မစားဖူးဘူးတဲ့ .. ဒါနဲ့ လုပ်နည်းပြောပြမယ်လို့ ပြန်ပြော လိုက်တယ်.. ပြောပြမယ် ဆိုတာက ဘလောဂ့်ပေါ်မှာ တင်ပေးမယ် အားလုံးလဲ သိအောင် စိတ်ဝင်စား သူတွေလဲ လုပ်စားကြည့်လို့ ရအောင်ပေါ့နော်.. အရသာလေးက ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးနဲ့ ဆိုတော့ ငါးမကြိုက်တဲ့ သူတွေတောင် စားလို့ ကောင်းလောက်ပါတယ်.. ခက်ခက်ခဲခဲလဲ မဟုတ်တော့ လူတိုင်းအလွယ်တကူ လုပ်စားလို့ ဖြစ်ပါတယ်.. နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ တစ်ယောက်တည်း ချက်စား သူများ၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ စားသူများလည်း အပြောင်းအလဲလေး လုပ်စားကြည့်ပေါ့နော်.. လျှာလည် သွားမှာပါ.. အဲ အချိုးအဆ လေး မှန်အောင်တော့ ခန့်မှန်းပြီး ထည့်ပေါ့နော်... သံပုရာနံ့ ငရုပ်သီးနံ့ မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရသာက လူတိုင်း သွားရေကျချင်လာအောင်တော့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်.. အရသာလဲ ရှယ်ပါဘဲ...... :)
ဒါကတော့ ငါးသံပုရာပေါင်း လုပ်မဲ့ ငါးပေါ့နော်.. တီလားဗီယား(ဆလားဗီးယား)ငါး၊ ငါးကြင်း၊ ဘယ်ငါးအမျိုး အစားနဲ့ မဆို လုပ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်.. ( ကြေးခွံမပါတဲ့ ငါးကလွဲလို့ပေါ့..)
အဲဒီငါးကို ရေစင်စင်ဆေးပြီး အကြေးခွံခွာ ဓါးနဲ့ ခပ်ကျဲကျဲလေးမွန်းပါတယ်.. ပြီးရင် ငါးတစ်ကောင်လုံး ထည့်လို့ ဆန့်မဲ့ အိုးထဲမှာ ရေအတော်အသင့် ထည့်ပါတယ်.. ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ စပါးလင်(ရှိက) အနည်းငယ်စီထည့်ပါ.. ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ အသားမှုန့် ထည့်ပြီး ရေဆူပါက ငါးကို ထည့်ပြုတ်ပါ.. ၃ မိနစ်ခန့် အကြာတွင် ငါးကို နောက်တစ်ဘက်သို့ လှန်ပေးပါ.. ဆား၊ အချိုမှုန့်ကို ခပ်လေးလေး ထည့်စေချင်ပါတယ်.. သို့မှသာ ငါးအသားအတွင်းသို့ ၄င်း အရသာများ ၀င်မှသာ စားကောင်းမည်ဖြစ်ပါတယ်.. မဟုတ်ရင်တော့ ငါးအသားထဲသို့ အရသာ မ၀င်ဘဲ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့ စားမကောင်းပါ.. မိုက်ခရိုဝေ့ သုံးသူများ အတွက် ငါးကို ဆားအချိုမှုန့် ( ဟင်းချက်ဝိုင်ဖြူ ) နဲ့ နယ်ပြီး မိုက်ခရိုဝေ့ထဲကို ၇ မိနစ်ခန့် ထည့်ပေါင်းလိုက်ပါ.. ငါးပြုတ်တဲ့ အခါ ဂျင်းကို ပါးပါး ရှည်ရှည် သွယ်သွယ်လေး လှီးပြီး ငါးကျက်ခါနီးမှ ထည့်ရင် လှလဲ လှသလို မွှေးလဲပိုမွှေးပါတယ်..
ဒါကတော့ ငါးကို ပြုတ်နေတာပါ.. သံပုရာပေါင်းလို့ဆိုပေမဲ့ ငါးကို ခုလိုဘဲ ပြုတ်ပါတယ်..
နံနံပင်၊ ဖက်ဖယ်၊ ပင်စိမ်း၊ ရှမ်းနံနံ ( အားလုံးမရှိလဲ တစ်မျိုး နှစ်မျိုးလောက် ရှိလဲဖြစ်ပါတယ်) ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း (များများ) စသည်တို့ကို တောက်တောက်စင်းပါ.. ပြီးလျှင် ပန်းကန်တစ်လုံးထဲ ထည့်ထားပါ.
ပြုတ်ပြီး အရသာဝင်ပြီး ငါး
တောက်တောက်စင်းထားတဲ့ ငရုပ်သီး၊ နံနံ၊ ကြက်သွန်ဖြူ တို့ပါ။ သံပုရာသီး ၂လုံးလောက် ညှစ် ထည့်ထားပါတယ်.. အချဉ်ကတော့ ကိုယ့်အကြိုက်ပေါ် မူတည်ပြီး သင့်သလို ထည့်လို့ရပါတယ်..
အစောက ပြုတ်၍သော်လည်းကောင်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့ သော်လည်းကောင်း၊ ကျက်ပြီးဖြစ်တဲ့ ငါးကို ဇောက် ခပ်နက်နက် ပန်းကန် ခပ်ပြားပြား တစ်လုံးထဲကို ထည့်ပါ.. ပြီးရင် ငါးပြုတ်ထားတဲ့ အရည်ကိုပါ ထည့်ပါ... နောက်ဆုံးမှာ နံနံ၊ ငရုပ်သီး စသည် တောက်တောက်စင်းထားသမျှနဲ့ ညှစ်ထားသော သံပုရာရည်တို့ကို ငါးအပေါ် လောင်းချလိုက်ပါ.. မွှေးကြိုင်သင်းပျံ့ပြီး အရသာထူးတဲ့ ငါးသံပုရာပေါင်းကို ရပါပြီ.. ခံတွင်းပျက်သူများနဲ့လည်း သင့်တော်ပါတယ်.. ဧည့်သည်လာရင်လဲ အထူးအဆန်းလေး အဖြစ်နဲ့ ဧည့်ခံလို့ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ ဟင်းလျှာတစ်ခွက် ဖြစ်လာမှာပါ..
ဒီလို ဒီလို လေးပါ.... သူငယ်ချင်း အားလုံးအတွက် အရည်သောက်ရင်လဲ ကောင်း အဖတ်စားရင်လဲ အဆင်ပြေမဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ငါးသံပုရာပေါင်းပါရှင်...... :P
ဒါကတော့ နောက်တစ်ကြိမ် လုပ်စားဖြစ်တဲ့ခါ ရိုက်ထားတာပါ။ အဲဒီမှာတော့ ဂျင်းလေးတွေကို အချောင်းလေးတွေ ဖြစ်အောင် လှီးပြီး ထည့်ထားပါတယ်။
အားလုံးဘဲ စားကောင်း သောက်ကောင်း ဖြစ်ကြပါစေနော်...... :) :)
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, February 15, 2010 Monday, February 15, 2010 Labels: ရသစာစုများ
ဆေးခန်းပိတ်ပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ စီစဉ်နေတုန်း ည ၉နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော့် ဆေးခန်းတံခါးကို ကသောကမြော ခေါက်သံ ကြားလိုက်ရပါတယ်.. ဆေးခန်းတံခါး လာခေါက်သံတွေထဲမှာ အခုလောက် အရေးတကြီး ကသုတ်ကရက် နိုင်တဲ့ တံခါးခေါက်သံမျိုး ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မကြားခဲ့ဖူးပါဘူး..
“ ၀င်ခဲ့ပါ.. ၀င်ခဲ့ပါ.. ” ကျွန်တော် စိတ်မရှည်စွာ တုံ့ပြန်လိုက်မိပါတယ်.. အခန်းတံခါး ဆွဲဖွင့်သံကြားလိုက်ပြီး တံခါးဝမှာ ပေါ်လာတာက အသက် ၉နှစ်ထက် ဘယ်လိုမှ ကြီးမဲ့ပုံ မရတဲ့ ကောင်မလေး.. ကြည့်ရတာ ထိတ်ထိတ်လန့်လန့် တုန်တုန်ရီရီနဲ့.. မျက်နှာတစ်ခုလုံး ဖြူဖွေးဖျော့တော့လို့.. မျက်လုံးလေးတွေကလဲ ရီဝေညှိုးငယ်စွာနဲ့..
“ တောင်းပန်ပါတယ် ဆရာရယ်.. သမီး အမေ အသည်းအသန် ဖျားနေလို့ပါ.. သူဟာ သေလုမျောပါး ဖြစ်နေပါတယ်.. အမေ့ကို ကယ်ပါဦး ဆရာရယ်.. အိမ်ကို လိုက်ပြီး အမေ့ကို ကုပေးပါနော်…”
“ ဆရာက ဘယ်အိမ်ကိုမှ လိုက်မကုပါဘူး.. သမီးအမေကိုသာ ဒီဆေးခန်းကို ခေါ်လာခဲ့ပါကွယ်.. ”
“ဆရာရယ် အမေက ဘယ်လိုမှ မထနိုင်လို့ပါ.. ဆရာသာ လိုက်မကြည့်ဘူးဆိုရင် သမီးအမေ သေရပါတော့မယ်.. သမီးကို သနားသဖြင့်လိုက်ကြည့်ပေးပါ ဆရာရယ်.. သမီး တောင်းပန်ပါတယ်နော်.. ”
ကလေးမလေးရဲ့ မျက်ဝန်းထဲမှာ မျက်ရည်ဥလေးများ တစ်လိမ့်လိမ့် ကျဆင်းလာရင်း နှုတ်မှလည်း အဆက်မပြတ် တိုးလျှိုးတောင်းပန်သံလေးက သနားစဖွယ်.. ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲက ကြင်နာ သနားစိတ်တွေ ယိုဖိတ်လာတာနဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ အိမ်ကို လိုက်သွားကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်..
ဆေးအိတ်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်ရင်း ကလေးမလေးကို ရှေ့ကနေ လမ်းပြဖို့ပြောလိုက်တော့ ၀မ်းသာစိတ်နဲ့ လက်ခနဲဖြစ်သွားတဲ့ သူမရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေက ချစ်စရာ… ကလေးမလေးက ဦးဆောင်ပြီး သူမအိမ်ရှိရာ လမ်းအတိုင်း လျှောက်လာကြပါတယ်.. ၁၀ မိနစ်ခန့် လျှောက်လာပြီးနောက် အိမ်ကလေး တစ်လုံးရှေ့ အရောက်မှာ အိမ်တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့ကို အရင်ဝင်စေပါတယ်.. ကျွန်တော် အိမ်ထဲကို ရောက်သွားချိန်မှာ အိပ်ရာ ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးထက်မှာ လှဲလျောင်းနေတဲ့ လူနာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. တော်တော်လေးကို နေမကောင်း ဖြစ်နေပုံပါ.. တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ခြစ်ခြစ်တောက် ပူကျစ်နေပါတယ်.. လူနာဟာ သူ့လက်ကိုတောင် အပေါ်မြှောက်နိုင်တဲ့ အင်အားမရှိတော့ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ လူနာရဲ့ မျက်လုံးတွေက ဆရာဝန် ရဲ့ အကူအညီကို အသည်းအသန် လိုအပ်နေကြောင်းကို ဖော်ပြနေတယ်.. သူမကို ကယ်တင်ဖို့ တောင်းပန်နေတဲ့ အရိပ်အယောင် တွေကိုလဲ အတိုင်းသား မြင်နေရပါတယ်..
ကျွန်တော် လူနာအမျိုးသမီးကို လိုအပ်တဲ့ ဆေးကုသမှုကို ပေးဖို့ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက် ပါတော့တယ်.. ထူးဆန်းတာက ခုနက ကျွန်တော့်ကို တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ လာခေါ်တဲ့ ကလေးလေးကို လုံးဝ ထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး… တစ်အိမ်လုံးမှာလည်း အခြားအိမ်သား တစ်ယောက်တစ်လေကိုမှ ကျွန်တော် မတွေ့မိပါဘူး.. တကယ်လို့ ဒီညသာ ကျွန်တော် ရောက်မလာဘူးဆိုရင် လူနာအမျိုးသမီးဟာ အသက် ဆုံးရှုံးကောင်း ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်.. သူ့အဖျားက အတော်ကို စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ.. အဖျားကျအောင် တစ်ညလုံးနီးပါး ကျွန်တော် ကြိုးစားပမ်းစား ကုသလိုက်ရပါတယ်.. မနက်မိုးလင်းခါနီးမှ လူနာဟာ စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာပါတယ်.. ကျွန်တော်က လူနာအမျိုးသမီးကို အိမ်ပြန်တော့မဲ့အကြောင်းနဲ့ ညနေပိုင်းလောက်မှ တစ်ခေါက် ပြန်လာကြည့်မဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်… ပြီးတော့ ဆေးအိတ်ကို ဆွဲပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်..
ညနေပိုင်း ဆေးခန်းမဖွင့်ခင် လူနာအိမ်ကို ကျွန်တော် ပြန်ရောက်သွားပြီး လူနာကို လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါတယ်.. တော်တော်လေး အခြေအနေ ကောင်းသွားပါပြီ.. ခုတော့ လူနာဟာ စကားလဲ ကောင်းမွန်စွာ ပြောနိုင်တဲ့ အနေအထား ရောက်နေပါပြီ.. တစ်ညလုံး ကုသပေးခဲ့တဲ့ အတွက် လူနာက ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးစကား အထပ်ထပ်ဆိုပါတယ်.. ကျွန်တော်က ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်..
“ တကယ်လို့ ကလေးမလေးသာ လာမခေါ်ရင် အဒေါ်ဟာ သေတောင် သေသွားနိုင်ပါတယ်.. သူ့ရဲ့ သနားစရာ တောင်းပန်မှုကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော် ဒီကို ရောက်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး… သိပ်လိမ္မာ သိတတ်တဲ့ကလေးလေးပါဘဲဗျာ.. မိဘအပေါ် သိပ်သိတတ်တဲ့ ဒီလို ကလေးမျိုး မွေးထားရတာ အဒေါ်ဘယ်လောက်များ ဂုဏ်ယူလိုက်မလဲနော် ”
ကျွန်တော့စကားကြားတဲ့ လူနာအမျိုးသမီးရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ အပြောင်းအလဲများစွာနဲ့ အံ့သြတဲ့ အရိပ်အယောင်များ ဖြတ်ပြေးသွားပါတယ်.. အချိန်အတော်ကြာအောင် တိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့မှ စကားသံ ထွက်လာပါတယ်..
“ဆရာ.. ကျွန်မသမီးလေးက ဆုံးသွားတာ ၃နှစ်တောင် ရှိပါပြီ.. ဟိုနံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ပုံဟာ သမီးလေးပုံပါ… ဆရာ ကျွန်မသမီးလေးကို သိလို့လားဟင်.. ”
ကျွန်တော် ထိုင်ရာက ထပြီး နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံအနီးကို တိုးကပ်ပြီး သေချာအောင် ကြည့်လိုက် မိပါတယ်.. သေချာပါတယ်.. ဒီကလေးမဟာ မနေ့ညက ကျွန်တော့ဆေးခန်း တံခါးကို ခေါက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ဒီရောက်အောင် ခေါ်လာတဲ့ကလေးမလေးပါဘဲ.. ဒီရုပ်လေးကို ကျွန်တော်မှားစရာ အကြောင်းမရှိပါ.. ထူးဆန်း အံ့သြစိတ်တွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့စွာ ဓာတ်ပုံရှေ့မှာ အကြာကြီးရပ်နေမိပါတယ်.. ပြီးတော့ လေးလေး နက်နက် စဉ်းစားနေမိတယ်.. မနေ့ညက တံခါးခေါက်သံဟာ ခုချိန်ထိ သူ့အာရုံမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ရှိနေတုန်း ပါ.. သူ့ကို ကလေးမလေးဟာ ဒီနေရာထိအောင် ခေါ်လာတယ် ဆိုတာလဲ သူ့အနေနဲ့ မမှတ်မိစရာ မရှိပါ..
အင်း… ဒါဟာ မေတ္တာတရားရဲ့ ထူးခြားဆန်းကျယ်မှုဘဲ ဖြစ်မှာပါ.. ခေါင်းကို တစ်ဆတ်ဆတ် ငြိမ့်မိရင်း ကျွန်တော် တစ်ချက် ပြုံးလိုက်မိပါတယ်.. အဒေါ်ကြီးကိုတော့ ကလေးမလေး အကြောင်း ဘာမှ ထပ်မပြောမိတော့ပါဘူး.. တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ သိပ္ပံပညာက လိုက်မမီတဲ့ အရာတွေဟာ ဒီလောကကြီးထဲမှာ ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာ သူလက်ခံလိုက်မိပါတယ်…
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် ထူးခြားဆန်းကျယ် လေးနက်တဲ့ မေတ္တာရဲ့ သဘောတရားကို ဖော်ပြနေပါတယ်.. မိဘက သားသမီးအပေါ် ထားတဲ့ မေတ္တာဟာ အတုမရှိ လေးနက်သလို သားသမီးက မိဘအပေါ်ထားတဲ့ အချစ်ကလဲ နက်ရှိုင်းကျယ်ဝန်း လှပါတယ်.. ဒီဇာတ်လမ်းမှာ သေသွားပြီး တာတောင်မှ မိဘအပေါ် ကူညီစောင့်ရှောက်နေသေးတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အံ့သြ ဆန်းကျယ်တဲ့ မေတ္တာစိတ်ကလေးကို စာဖတ်သူများ သတိပြုမိနိုင်ရန်အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်..
Wonderful Little Girl ( Unknow Author) ကို ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်..
မိမိဦးနှောက် ဘယ်လောက်တောင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသလဲ?
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, February 15, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ကိုယ့်ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ဘယ်လောက်တောင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်.. ပညာရှင်တွေကတော့ ပြောကြတယ်.. ဦးနှောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အချို့နေရာတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးတဲ့… စာဖတ်သူ ယုံရဲ့လားမသိဘူး..? မယုံဘူးလား. ဒါဆိုရင် ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ စမ်းကြည့်လေ.. အချိန်ခနလေးပေးပြီး ဒီနည်းလမ်းလေးကို စမ်းသပ်ကြည့် ပေါ့နော်.. မယုံလို့ လုပ်ကြည့်လေ.. သေချာအောင် ထပ်လုပ်ကြည့်မိလေ.. ဒီလိုနဲ့ ခနခန လုပ်ကြည့်မိ လိမ့်မယ်.. ဦးနှောက်စားသွားပြီလား.. ကဲ …… ဒီလိုဆိုရင် သေချာသွားအောင် စမ်းလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်.. စမ်းရမဲ့ နည်းလမ်းလေး ပြောပြမယ်.. လိုက်လုပ်ကြည့်နော်…
၁. အခု ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်နေပြီး ဒီစာကို ဖတ်နေတယ် မဟုတ်လား.. ညာဘက်ခြေထောက်လေးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ကနေ နည်းနည်းလေး ကြွလိုက်နော်.. ပြီးရင် ခြေထောက်ကို နာရီလက်တံလှည့်တဲ့အတိုင်း ဖြေးဖြေးချင်း လှည့်ကြည့်ကြည့်ပါလား.. မမှားစေနဲ့နော် နာရီလက်တံ ဘယ်ကိုလည်နေတယ် သိတယ်ဟုတ်? အဲဒီလို နည်းနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်း ညာခြေထောက်လေးကို စက်ဝိုင်းပုံ လှည့်နေနော်
၂. ခြေထောက်က ဒီလို လှည့်နေရင်းနဲ့ ညာဘက်လက်ကို လေထဲမှာ ထားပြီး အင်္ဂလိပ် ဧက္ခရာ6ပုံကို ဆွဲချကြည့်ပါလား…6ဆိုတာ အပေါ်ကနေ စပြီး အောက်ကို ဆွဲချတဲ့ ရေးနည်းအတိုင်း လက်ကို လေထဲမှာ ထားပြီး ရေးရမှာနော်… ခြေထောက်ကို လှည့်နေရင်း လက်ကိုလည်6းပုံ ဖြစ်အောင် ရေးနေရင်းနဲ့ သတိထားလိုက်မိရဲ့လား ခြေထောက်ဟာ လက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း နာရီလက်တံ ပြောင်းပြန် ပြန်လည်မိနေပြီ.. မသေချာဘူးလား နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်လေ..
ပြောသားပဲလေ.. ခနခန လုပ်ကြည့်မိလိမ့်မယ်လို့.. ရုံးသမားတွေ ရုံးမှာ ခြေထောက်ကြီး မြောက်ပြီး လက်ကို လေထဲမှာ ရေးနေမိရင် ကျန်တဲ့ သူတွေက ၀ိုင်းကြည့်ပြီး ဂေါက်သွားပြီလားလို့ အမေးခံရမှာ သေချာတယ်နော်…. စာဆက်ရေးလိုက်ဦးမယ်.. ဒါလေးကို အပျင်းပြေ စမ်းသပ်ကြည့်နေလိုက်ပေါ့. စမ်းကြည့်လို့ အဖြေထွက်လာရင် အောက်မှာ မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးသွားကြပေါ့နော်.. :) :)
Source : Funzug.com
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, February 14, 2010 Sunday, February 14, 2010 Labels: ဘာသာပြန် ခံစားမှု ၀တ္ထုများ
သူမရဲ့နံမည်လေးက မနှင်းဆီ.. နံမည်နဲ့လိုက်အောင် ပန်းလေးတစ်ပွင့်လို နူးညံ့ သိမ်မွေ့စွာ လှပသူ… သူမ အနှစ်သက်ဆုံး ပန်းဟာလည်း အနီရောင်နှင်းဆီပန်းသာ ဖြစ်ပါတယ်.. မနှင်းဆီလေးရဲ့ ခင်ပွန်းက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ချစ်သူများနေ့မှာ သူမ နှစ်သက် သဘောကျတဲ့ အနီရောင် နှင်းဆီပန်းတွေကို အလွန်လှပ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းစည်းလေး ပြုလုပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်.. သူမတို့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ပျော်ရွှင်သာယာပြီး လူတကာ အားကျရတဲ့ စံပြ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ကံတရားရဲ့ ရက်စက်စွာ ထိုးနှက်မှုကြောင့် သူမချစ်တဲ့ ခင်ပွန်းဟာ မမျှော်လင့်တဲ့ မတော်တဆမှု တစ်ခုနဲ့ တိမ်းပါး သွားခဲ့ရပါတယ်.. အရူးတစ်ပိုင်း ဖြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့ မနှင်းဆီလေးဟာ ၀မ်းနည်း ဆွေးမြေ့ခြင်း၊ အထီးကျန် အားငယ်ခြင်းတို့ကိုသာ အဖော်ပြုလို့ ဘ၀ကို ငြီးငွေ့စွာ ဖြတ်သန်းရပါတော့တယ်..
ဒီနေ့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက် ချစ်သူများနေ့ဖြစ်ပါတယ်… မနက်စောစော အိပ်ရာနိုးနိုးခြင်း မနှင်းဆီ အရင်ဆုံး သတိရမိတာက သူ့ခင်ပွန်းကိုပါ.. ဒီနေ့ရောက်တိုင်း သူ့ဆီကနေ မနှင်းဆီချစ်တဲ့ နှင်းဆီနီလေးတွေ လက်ဆောင် ရနေကျ.. ခုတော့ တစ်ယောက်တည်း ကြေကွဲ လွမ်းဆွတ် နေရတဲ့ အထီးကျန် ဘ၀ကို တွေးမိရင်း ၀မ်းနည်းစိတ်က ရင်ထဲမှာ တစ်လှိုက်လှိုက်နဲ့ ဆို့တက်လို့ လာပါတယ်.. အဲဒီချိန်လေးမှာဘဲ အိမ်တံခါးခေါက်သံကို သူမကြားလိုက်ရပါတယ်.. အိပ်ရာက အသာထလို့ အိမ်ရှေ့တံခါးအဖွင့်မှာ အံ့သြစရာ မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုက ထူးဆန်းစွာ ဆီးကြို လိုက်ပါတယ်.. အလွန်လှပတဲ့ နှင်းဆီပန်းကြီးတစ်စီး သူမရဲ့ အိမ်တံခါးအနီးမှာ .. သူမကြိုက်တဲ့ အနီရောင်ရင့်ရင့် နှင်းဆီတွေ… မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့လေးတွေကလည်း ကြူကြူသင်းလို့… နှင်းဆီပန်းလေးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကဒ်လေးပေါ်မှာတော့ “ချစ်တဲ့ နှင်းဆီလေးအတွက် ချစ်လက်ဆောင်” တဲ့… အခါတိုင်း သူမခင်ပွန်းရှိစဉ်က ချစ်သူများနေ့မှာ ပေးနေကျ ပန်းလက်ဆောင် အတိုင်းပါဘဲ.. ရေးထားတဲ့စာက အစ ခါတိုင်းနှစ်တွေနဲ့ တစ်ပုံစံတည်း….
မနှင်းဆီ သိလိုက်ပါပြီ.. သူမခင်ပွန်းဟာ မကွယ်လွန်ခင်ကတည်းက သူမကို ဒီနေ့မှာ ပန်းလက်ဆောင်ပေးဖို့ ပန်းဆိုင်မှာ ကြိုတင်ငွေချေပြီး မှာထားခဲ့ပုံရပါတယ်… ဒီနှစ်ဟာ သူမအတွက် ချစ်ခင်ပွန်းဆီက နောက်ဆုံးရတဲ့ နှင်းဆီပန်း လက်ဆောင်လဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.… သူမချစ်တဲ့ ယောက်ျားဟာ သူသေဆုံးမှာကို ကြိုသိလို့ အော်ဒါမှာထားခဲ့တာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. သူဟာ အလုပ်တစ်ခု လုပ်ရင် အချိန်မကျခင်ကတည်းက အမြဲတမ်း ကြိုတင်စီစဉ်တတ်တဲ့ အကျင့် ရှိသူတစ်ယောက်ပါ… တကယ်လို့ အလုပ်သိပ်များလို့ မေ့လျော့သွားခဲ့ ရင်တောင် ကြိုတင် စီစဉ်ထားခြင်း အားဖြင့် အရာရာဟာ ပုံမှန် လည်ပတ်သွားနိုင်အောင် သူမယောက်ျားဟာ စေ့စပ်သေချာလှသူ ဖြစ်ပါတယ်…
မနှင်းဆီက နှင်းဆီပန်းစည်းလေးကို အိမ်တွင်းသို့ တယုတယ ယူဆောင်လာပြီး ပန်းအိုး လှလှလေး တစ်ခုထဲ ထိုးစိုက်လိုက်ပါတယ်.. သူမယောက်ျားရဲ့ ပြုံးရွှင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံဘေးမှာ ပန်းအိုးလေးကို ချထားလိုက် ပြီးတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူ ထိုင်နေကျ ခုံလေးမှာ ထိုင်ကာ ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ ပန်းစည်းလေးကို အတော်ကြာအောင် စိုက်ကြည့် နေမိပါတယ်… သူမတို့ ၂ယောက်ရဲ့ အတိတ်က ပျော်စရာအချိန်တွေကို တစ်ရေးရေးနဲ့ ပြန်မြင်ယောင်လာရင်း ကြည်နူး ပျော်ရွှင်စိတ်နဲ့အတူ ကြေကွဲ ၀မ်းနည်းစိတ်ပါ တစ်ပြိုင်တည်း ခံစားရပါတယ်… သူဟာ ဘာလို့များ သူမအနားကနေ စောစောစီးစီး ထွက်ခွာသွားရတာပါလဲ.. ခုလိုချိန်မှာ သူမရဲ့ ဘေးနားမှာ ရှိနေပြီး ဒီပန်းစည်းလေးဟာ သူမ ယောက်ျား ကိုယ်တိုင် ပေးတဲ့ ပန်းစည်းလေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်များ ပျော်စရာကောင်းလိုက်မလဲနော်..
ဒီလိုနဲ့ တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးသွားပြန်ပါပြီ.. ချစ်သူနဲ့ သေကွဲကွဲပြီး တစ်ယောက်တည်းနေရသူအဖို့ ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာ၊ ခြောက်ခြားစရာ ကောင်းလောက်အောင် လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ သူမအတွက်တော့ အထီးကျန် လွန်းလှပါတယ်.. ပျော်ရွှင်မှု ဆိုတာ ရှာဖွေလို့ မတွေ့တော့လောက်အောင် အရာရာဟာ ကြေမွ ဆိတ်သုန်းလို့၊ ယုံကြည်ချက် အနာဂတ်မဲ့နေတဲ့ သူလို ဖြစ်နေပါတော့တယ်… ဒီတစ်နှစ်လဲ ထုံးစံအတိုင်း ချစ်သူများနေ့ ရောက်လာပြန်ပါတယ်.. မနက်ခင်းလေးမှာ အိမ်ရှေ့တံခါး ခေါက်သံလေး မြည်လာတဲ့အတွက် အပြေးအလွှား သွားရောက်လို့ တံခါးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ လှပ နီရဲနေတဲ့ နှင်းဆီပန်းတွေ..
နှင်းဆီပန်းတွေကို ကြည့်ပြီး မနှင်းဆီလေးမှာ ထူးဆန်းအံ့သြခြင်း မယုံကြည်နိုင်ခြင်းများနဲ့ မှင်သက်မိလို့.. ဘယ်ချိန်ထိ ကျောက်ရုပ်လေးလို ရပ်နေမိတယ် မသိ.. သတိရတဲ့အချိန်မှာ နှင်းဆီပန်းစည်းကို ကိုင်ဆောင်လို့ အိမ်ထဲကို အပြေးအလွှား ၀င်ရောက်ကာ ပန်းစည်း စီစဉ်ပေးပို့တဲ့ ဆိုင်ကို ဖုန်းဆက်ပါတော့တယ်…
ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဖုန်းလာကိုင်တဲ့အချိန်မှာ သူမက မေးခွန်းတွေ မေးမိပါတယ်…. ဘယ်သူက ခုလို ဒီပန်းစည်းတွေကို သူမကို နာကျင်ခံစားစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ ပို့ပေးနေတာလဲ.. သူမကို ရှင်းပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်… ပန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်က “ခင်ဗျားယောက်ျား လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် လောက်က ဆုံးသွားပြီဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်.. ခင်ဗျား ဖုန်းဆက်မေးလိမ့်မယ် ဆိုတာလဲ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပြီးသားပါ.. ခင်ဗျား အရမ်းကို သိချင်လိမ့်မယ်ဆိုတာလဲ ကျွန်တော် တွေးမိပါတယ်.. ခံစား နားလည်ပေးလို့ ရပါတယ်.. ခင်ဗျား ဒီနေ့ လက်ခံရရှိတဲ့ပန်းတွေဟာ ခင်ဗျား ခင်ပွန်း ကိုယ်တိုင် ငွေချေပြီး ကြိုတင်စီစဉ် ထားတဲ့ပန်းတွေပါ.. ဒီလို နှင်းဆီပန်းတွေကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခင်ဗျား လက်ခံရဦးမှာပါ.. ခင်ဗျားယောက်ျားဟာ အရာရာကို ကြိုတင် တွက်ချက်ပြီး ခင်ဗျားအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်... ပန်းစည်းမှာ ချိတ်ဖို့ ကဒ်ပြားလေးနဲ့ အတူ စာလေးတွေကိုလည်း သူကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်.. တကယ်လို့များ သူမရှိတော့ရင်တောင် နှင်းဆီပန်းတွေကို ခင်ဗျားဆီကို ဆက်ပြီး ပို့ပေးဖို့ သူမှာခဲ့ပြီးသားပါ.. ဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူကိုယ်တိုင် ဆိုင်ကို တစ်ခေါက်မှ ရောက်မလာတော့ဘူး ဆိုကတည်းက သူမရှိတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သိလိုက်ပါတယ်.. ဒီတော့ သူမှာကြားခဲ့တဲ့ အတိုင်း နှင်းဆီပန်းလေးတွေနဲ့ ခင်ဗျားအတွက် အထူး စီစဉ် ရေးသားထားတဲ့ စာလေးကို ဒီနေ့ ခင်ဗျားဆီ မပျက်မကွက် ကျွန်တော် အရောက်ပို့ပေး လိုက်ပါတယ်.. နောင်နှစ်တွေမှာလဲ ခင်ဗျားဆီ ကျွန်တော် ပို့ပေးဦးမှာပါ.. ဒါဟာ ခင်ဗျား ခင်ပွန်းရဲ့ အစီအစဉ်တွေကြောင့်ပါဗျာ….”
မနှင်းဆီ ပန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို ကျေးဇူးစကားဆိုရင်း ဖုန်းကို ချလိုက်ပါတယ်.. သူမရဲ့ တုန်ယင်နေတဲ့ လက်အစုံနဲ့ ပန်းစည်းလေးပေါ်က စာအိတ်လေးကို ဖြုတ်ယူလိုက်ပါတယ်.. စာအိတ်လေးထဲမှာတော့ စာလေးတစ်စောင် .. စာထဲမှာက သူမယောက်ျားရဲ့ လက်ရေးတွေနဲ့
မင်းအနားမှာ ကိုယ်မရှိနိုင်တော့ဘူးနော်... ကိုယ်မရှိတဲ့အခါ ဘ၀ကြီးကို မင်းတစ်ယောက် တည်း ရင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိပါတယ်.. မင်းတစ်ယောက်တည်း ဘယ်လောက်တောင် အထီးကျန်မယ်.. ကြေကွဲ ပူဆွေးနေမယ် ဆိုတာလည်း ကိုယ်နားလည်စာနာပါတယ်.. မင်းကို ကိုယ် ဘယ်လောက်တောင် ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ မင်းသိခဲ့မှာပါနော်… ကိုယ်တို့၂ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေ၊ အကြင်နာတွေနဲ့ ကိုယ်တို့ဘ၀ကို လွှမ်းခြုံလို့ ပျော်ရွှင်သာယာဖွယ် ကမ္ဘာလေးကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ် . သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကို ကိုယ်တို့ရရှိခဲ့ကြတယ်လေ... ဘ၀မှာ အချစ်တွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံ ခဲ့ကြတယ်… အချစ်ရယ်.. မင်းဟာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံး အမွန်မြတ်ဆုံး ဇနီးမယားကောင်းတစ်ဦးပါ.. မင်းကို ပြောပြစရာ စကားလုံး ရှာမတွေ့လောက်အောင် ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါတယ်..
ကိုယ့်ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ မှန်သမျှကို သိတတ်စွာ အမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို အမြဲ နားလည်ပေးခဲ့တဲ့ မင်းဟာ ကိုယ့်အတွက် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သလို အကောင်းဆုံး ချစ်သူ တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်.. မင်းကို ကိုယ် သိပ်တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်.. ကိုယ်ဟာ မင်းအနားမှာ မရှိတော့ပေမဲ့ ၀မ်းနည်း ပူဆွေးမနေပါနဲ့ အချစ်ရယ်. မျက်ရည်တွေကို သုတ်လိုက်ပါ နော် မင်းကို အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်စေချင်တယ်.. ဒါကြောင့်လဲ မင်းအတွက် နှင်းဆီပန်းလေးတွေ နှစ်စဉ်ပေးနိုင်ဖို့ ကိုယ်စီစဉ် ခဲ့တာပါ.. ဒီနှင်းဆီပန်းလေးတွေကို မင်းလက်ခံရတဲ့အခါတိုင်း ကိုယ်တို့၂ယောက်ရဲ့ အပျော်ဆုံး အချိန်တွေကို သတိရ လိုက်ပါ… ပြီးတော့ ကိုယ်တို့၂ယောက် ဘယ်လောက်တောင် ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ.. ကိုယ် မင်းကို သိပ်ချစ်ခဲ့တယ်.. အမြဲတမ်းလဲ ချစ်နေမှာပါ… ကိုယ်မရှိတော့တဲ့ အခါ မင်း ၀မ်းနည်းပူဆွေးပြီး ကျန်နေမှာကို ကိုယ်မလိုလားပါဘူး. ဒါကြောင့် ကျန်နေသေးတဲ့ မင်းဘ၀ရဲ့ အချိန်တွေကို ပျော်ပျော်နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါနော်..
မလွယ်ဘူးဆိုတာတော့ ကိုယ်လဲသိပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကြိုးစားပြီးနေပါအချစ်ရယ်…. ဒီနှင်းဆီနီလေးတွေဟာ မင်းပျော်ရွှင်စေဖို့ မင်းဆီကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရောက်လာပါလိမ့်မယ်… ပန်းဆိုင်က တစ်ယောက်ယောက် မင်းရဲ့အိမ်တံခါးကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီလိုနေ့တိုင်းမှာ တံခါးလာခေါက်မှာပါ… မင်းဆီက ဘာတုံ့ပြန်မှုမှ မရတော့တဲ့ နောက်ဆုံးတစ်နေ့ရောက်မှသာ နှင်းဆီပန်းလေးတွေ မင်းဆီပို့တာ ရပ်မှာပါ..… အဲဒီနေ့မှာ မင်းအိမ်တံခါးကို သူဟာ ၅ ကြိမ်တိုင်တိုင် အရောက်လာပြီး လာခေါက်ပါလိမ့်မယ်.. မင်းဆီက တုံ့ပြန်မှု မရတာ လုံးဝ သေချာပြီ ဆိုရင်တော့ မင်းမရှိတော့တာ သူတို့သဘောပေါက်ကြမှာပါ… အဲဒီလိုဆိုရင် နှင်းဆီနီလေးတွေကို ကိုယ်ညွှန်ကြားထားတဲ့ နေရာကို သူတို့ ဆက်ပြီး ပို့ပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီနေရာလေးဟာ မင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ လှဲလျောင်း အိပ်စက်အနားယူတဲ့ အုတ်ဂူလေး၂ခုပေါ့ကွယ်.. ဒီလို ချစ်သူများနေ့မှာ ကိုယ်တို့၂ယောက်ရဲ့ အုတ်ဂူလေးဟာ မင်းချစ်တဲ့ နှင်းဆီရနံ့တွေနဲ့ သင်းပျံ့ မွှေးမြနေပါလိမ့်မယ်.. ကိုယ်တို့၂ယောက်ကတော့ ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့် ရတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်နေကြမှာပေါ့အချစ်ရယ်.. ခုချိန်မှာတော့ ကျန်နေသေးတဲ့ မင်းရဲ့ အချိန်တွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်အောင် အားတင်းထားလိုက်ပါ ကိုယ့်အချစ်ဆုံးရယ်…..
အိုး... ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့် သူမဘာများ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲနေစရာ လိုသေးသလဲနော်... သူမ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး သူမ ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့ ခင်ပွန်းဆီက သူမချစ်တဲ့ နှင်းဆီပန်းတွေ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မလွဲမသွေ ရနေဦးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အချစ်တွေဟာ သူမဘေးနား ထာဝစဉ်ရှိနေတာနဲ့ အတူတူပါဘဲလေ... မနှင်းဆီ ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးလေးတစ်ပွင့်က ကြည်စင်ဝင်းပလို့.. သူမရဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေ ဟာလည်း ရွှန်းလက်တောက်ပလို့.. ဒါတွေဟာ ချစ်ခြင်းရဲ့ အင်အားထက်မြက်တဲ့ အစွမ်းကြောင့်ဘဲ မဟုတ်ပါလား....
ဇာတ်လမ်းလေးက စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ကောင်း ဆန်နေပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ပျော်ရွှင်စေလိုတဲ့ စိတ်ကလေးဟာ အရမ်းကို နှစ်သက်စဖွယ် လေးစားအားကျစဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်... ကိုယ်သေဆုံးပြီး ချိန်မှာတောင် ချစ်သူကို ပျော်ရွှင်ပြီး ကျန်ရစ်စေလိုတဲ့ ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးက ချစ်သူတိုင်းမှာသာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်မလဲနော်.. ချစ်တတ်ကြသူတိုင်း စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေ... ချစ်သူတိုင်းလည်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်.. ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက် ချစ်သူများနေ့ မှာ ကျွန်မရဲ့ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများကို ဒီဇာတ်လမ်းလေး လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါတယ်နော်...
Chicken Soup for the Gardener's Soul မှ James A.Kisner ရဲ့ Valentine Roses ကို ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်..
ချစ်သူတိုင်း ပျော်ရွှင်စွာ ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေရှင်..